China Silicone Bracelet uye Wristbands fekitori uye vagadziri | SJJ
Runhare Dzokera Bhandi
Silicone bracelets & tsika wristbands ndeyakakura, yakachipa mutengo yekukurudzira chinhu chinoshandiswa pakutsvaga mari, chiitiko uye mabasa erupo. Yakagadzirwa ne100% silicone zvinhu, isiri-chepfu inogara yakasimba uye inokurumidza kutumira nguva.
Silicone Zvishongouye mabhandi echikwata zvigadzirwa zvedu zvikuru, zvinova zvakanyanya uye zvinozivikanwa pasi rese. Iwo silicone wristbands ane mukurumbira weiyo yepamusoro mhando uye eco-inoshamwaridzana silicone rabha. Iyo silicone zvinhu ndeyezvakatipoteredza uye chikafu giredhi, inogona kutakura yakaderera kana yakakwira tembiricha, saka iyoSilicone Zvishongouye mabhandi emaoko anogona kushandiswa munzvimbo dzakasiyana uye nemwaka yese. Iyo silicone wristbands yakasununguka uye yakapfava yevana, saka ivo vanozivikanwa muzvikoro. Iwo masilicone mabhandi anochinjika uye akasimba zvakakwana kuti vanhu vakuru vashandise mukusimudzira kana zviitiko senge mitambo, carnival kana chero mamwe mapato. Zviratidzo zvakasiyana zvinogona kuvezwa, kuraswa, kudhinda kana laser rakatemerwa maererano nechikumbiro chako. Iwo magadzirirwo akasiyana kusangana nezvinodiwa zvako zvemusango, kuratidza pfungwa dzako dzemalogo, uye kusimba kuti ugare kwenguva yakareba. IyoSilicone Bracelets uye wristbands anowanzoitwa akagadzirwa akaenzana saizi evana kana vakuru, asi iwo akagadzirwawo zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi.
Iine makore anodarika makumi matatu neshanu nhoroondo, fekitori yedu inokwanisa mukupa yakakwira mhando yesilicrist wristbands uye zvishongo munguva pfupi. Tine zviitiko zvakapfuma pamahodhi makuru eSilicone Bracelets uye mawristband, asi zvisinei hazvo mirairo mikuru kana mini maodhi anogamuchirwa chero nguva. Mafekitori emafekitori anozopihwa kuti ubvumirwe iwe usati waita sampuli kana kugadzirwa. Vashandi vedu vane hunyanzvi uye vasikana vanotengesa vakanaka kuChirungu. Tiri kutarisira kubvunza kwako!
Zvishandiso: yepamusoro silicone
Saizi: Saizi akaenzana ari 202 * 12 * 2 mm yevakuru, 190 * 12 * 2 mm yevana. Yakagadziriswa saizi inogamuchirwa.
Colors: Inogona kufananidza PMS mavara, swirl, chidimbu, kupenya-mu-iyo-rima, fitter mavara aripowo.
Logos: Logos inogona kudhindwa, yakadhirowewa, kuraswa, ingi-yakabatana, Laser yakanyorwa nezvimwe
Apex 1 yori / Poly bhegi, kana maererano customers'request
MOQ: Hapana MOQ kukamurwa
Pashure: Stationery Sets
Zvadaro: Masoja Mari
Christian Silicone Zvishongo
Silicone Zvishongo Zvakachipa
Silicone Rubber Zvishongo
Silicone Rova Zvishongo
Mufananidzo Wakatemerwa Keychains
Lugguage tambo uye mabhandi